IPad Hype ... Maxaad Tahay Ku Xiga | Martech Zone
Isniin, February 7, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan laheynay labo qof oo dad ah oo ka cabanaya in balooggu uu arin ku leeyahay iPad-ka halkaas oo ay dhab ahaantii aysan aqrin karin qoraalada. Tani waxay ku saabsanayd qofkii tobnaad ee ka cawday bartayada iyo iPad-ka sidaa darteed ugu dambayntii waan jabay oo wax yar ayaan iibsanay. Mid waa aniga, midna waa aniga Stephen, Horumarkeenna… iyo kan kaleba waa mid idinka mid ah akhristayaal nasiib badan.
Dhowr maalmood ka dib oo gebi ahaanba waan xiisay. IPad-ka wuu ka culusyahay sidaan filayay, laakiin wuxuu sameeyaa bac aad u fudud oo fudud marka aan habeen walba gurigayga aado. Sharaxaadda shaashaddu waa wax la yaab leh oo is-dhexgalku aad ayuu u badan yahay, haddii aanu si sax ah u ahayn, sida iPhone-ka. Waan ku jees jeesay markii aan mid iibsanayay seemed waxay umuuqatay lacag lumis taleefanka iyo kamarada la'aanteed (waxaan maqlay kaamerada inay soo baxeyso bisha Maarso) Ma ahayn.
Horaan wax uga qoray Daily iyo khiyaanadayda ku saabsan codsigan oo u gudbinaya warka si dhab ah oo qabow, laakiin inta badan jacaylka aan u qabo iPad-ka ayaa ah sida ay horumariyayaashu uga faa'iideysteen taabashada iyo dhismaha si ay u siiyaan is-dhexgal aad uga wanaagsan.
Tusaalaha aan jeclahay inaan muujiyo ayaa ah Flipboard, Codsi ku riixaya dhammaan waxyaabahaaga bogag habsami leh oo habaysan oo aad si fudud ugu rogi karto. Sidoo kale waad sameyn kartaa sida iyaga, Jawaab on Twitter, gudbin, ama u soo dir maqaalka email ahaan. Codsigu waa sahlan yahay in la isticmaalo oo runtii waxaan ku noqday quudintayda RSS oo hadda waan cunaa subax kasta.
Furaha suuqleyda halkan waa fahamka in, markale, isdhexgalka isticmaalaha uu isbedelayo bartaada. Ma rajeynayo in qof kastaa uu baxo oo uu hagaajiyo adeegsade adeegsade gaar ah iPad-ka (inkasta oo aan hadda fiirineyno), laakiin waxaan kugula talin lahaa inaad sameyso wax ka badan si fudud boggaaga mid ka mid ah aaladahaas laga akhrisan karo. Anigoo ah isticmaale iPad ah, waxaan si rasmi ah ugu caajistay barta caadiga ah waxaanan raadinayaa khibrada weyn ee soo socota ee xigta.
Toddobaadkan, curiousmeboston @_______ ayaa guuleystay! Waxaan sugeynaa inaan dib uga maqalno iyaga si aan u aragno abaalmarinta ay jeclaan lahaayeen inay doortaan. Waxaa jira abaalmarino badan oo soo socda - oo ay ku jiraan Qalabaynta - foomamka si fudud ugu samee khadka tooska ah, Vontoo - u dir xusuusinta codka, iyo Santuuqa dhis, soo bandhig oo la soco soo jeedinta si fudud khadka tooska ah!
Feb 8, 2011 markay ahayd 2:45 PM
Doug, ku soo dhowow xafladda!
Intii aan diinta islaamka hore (wali wax jeclahay), runti waan fahmay awooda waxa la abuuray markii aabahay oo 74 jir ah uu mid amro ka hor intaanan samayn… hadana waxaan ka fiirsanayaa mid kale maxaa yeelay midna kuma filna qoyskiisa oo ka kooban laba qof. Tusaale kale oo ah naqshad warshadeed aad u wanaagsan oo ay weheliso horumar hal abuur leh. Sida iPhone-ka, muuqaalka ugu qabow waa barnaamijka softiweerka iyo xaqiiqda ah in waayo-aragnimada si joogto ah loogu hagaajin karo codsiyada ka wanaagsan.
Daily waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan geeddi-socodka hawlgalka. In kasta oo ay tahay wax aad u qabow, cusub, oo aan la mid ahayn wax kasta oo kale oo la heli karo, haddana weli waxaa jira qol aad u ballaaran oo qol lagu hagaajinayo (wuxuu ku socdaa gaabis badan, cusboonaysiinta waqti dheer ayey qaadataa, iwm.) Laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay * sii * wanaagsanaandoonto , taasoo ka dhigeysa khibrada guud ee qalabka ayada sidoo kale mid kafiican. Waxyaabo xiiso leh!
Feb 8, 2011 markay ahayd 1:45 PM
Markii ugu horeysay ee iPad la soo saaro, waxaan ku kala jeexjeexay hadal qof kasta oo dhageysanaya. Apple iyo Steve Jobs runti waxay rumeysnaayeen inay ka dhigayaan netbook waxtar la'aan?
Si kastaba ha noqotee, ka dib gacmahaygii ugu dambeeyay ee waayo-aragnimada, waxaan ahay diinta Khibradda UI waa mid weyn oo horumariyayaashu waxay abuureen barnaamijyo qurxoon oo jilicsan si looga faa'iideysto astaamaha ugu fiican ee iPad-ka.
Intii aan sugi lahaa nooca 2aad, waxaan qori doonaa xabadda oo waxaan iibsan doonaa mid kaligeyga ah, sidaas darteed aniguna sidoo kale waxaan qeyb uga noqon karaa dadka qabow. 🙂
Febraayo 9, 2011 saacadu markay tahay 1: 33 AM
Sharaxaad weyn oo Flipboard ah, waa codsi cabsi badan. Dhibic wanaagsan oo ku saabsan hubinta in websaydhkaaga lagu akhrin karo iPad-ka, ma hubo in qof kastaa ka fikirayo arrintaas.
Feb 9, 2011 markay ahayd 8:34 PM
Gabi ahaanba waan jeclahay. Isla marka makiinada qoristu xoogaa sifiican uhadasho oo howlaha badanna sifiican loo sifeeyo, waxaan ka tagayaa laptop-kayga guriga oo waxaan ku xirayaa iPad.